मुलुक एमालेमय छ भन्ने सन्देश दिन्छौं: रेशम लामा केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री नेकपा एमाले - Drishti Khabar
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २२, २०७८ | १०:३३:१३
अबको एमाले र एमालेमा तपाईको भूमिका के हो ?
अबको एमाले भन्ने पार्टी नै राष्ट्र निर्माणको अभियन्ता हो । पुस्ता रुपान्तरणको संवाहक हो । पुस्ता रुपान्तरण गर्ने क्रममा एमालेले बोकेको ऐजेण्डा जनताको समृद्धिलाई आधार मानेर जनतामाझ पु¥याउने अभियानमा हामी लागि परेका छौं । विकासको आरम्भ नेकपा एमालेको सरकारले सुरु गरेको छ । हिजो काभ्रे जिल्ला र आजको काभ्रे जिल्लामा धेरै फरक आएको छ । विकास कसले ग¥यो भन्ने कुरा जनताको सामु जगजाहेर नै छ । यो जसले सुरु ग¥यो यसलाई गन्तव्यमा पु¥याउने काम पनि नेकपा एमालेको हो । चाहे सरकारमा रहँदा होस् चाहे प्रतिपक्षमा रहँदा होस् ।
एमाले पार्टी व्यक्तिवादी भयो, विपक्षीहरुले ओलीवेशन भनिरहेको अवस्था छ नि ?
हामी देशभरिका कार्यकर्ता प्रतिनिधि साथीहरुले महाधिवेशनलाई जुन रुपमा प्रस्तुत ग¥यो, सफलता बनायो त्यो ऐतिहासिक छ । विश्व संचार जगतले नजिकबाट नियालेको छ । त्यहाँ कहाँ ओलीमय भयो र ? हाम्रा साथीहरुले लोकतान्त्रिक ढंगबाट महाधिवेशनलाई सम्पन्न गरेको छ ।
सडकमा जनता उतार्दैमा भव्य महाधिवेशन भन्ने अनि प्रतिनिधिमूलक गर्दा चाहिँ महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्ने टिप्पणी गर्न सकिन्छ ?
महाधिवेशन भनेको जसरी नेकपा एमालेले सम्पन्न ग¥यौं । त्यसले अबको नेपाली राजनीतिक आकाशमा अब नेकपा एमाले बाहेकको अरु राजनीतिक दल छैन भन्ने चाहिँ प्रमाणित गरेको हो । अब प्रतिनिधिमूलक भनेपनि जे भने पनि उहाँहरु एउटा होटलमा बसेर के काम अह्राउँछ भनेर सुन्न आतुर भएका बसेकाहरु नेपाली जनताको मनोभावनामा प्रवेश गरेर नेपाली जनताको मन जितेर आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्ने हैसियत छैन भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ ।
भएका दलहरु एकातिर र नेकपा एमाले मात्रै एकातिर हुँदा नेकपा एमालेले सोचेको समृद्धि सम्भव छ ?
आकाशमा नौलाख ताराहरु हुन्छन् । तर एउटा ध्रुवताराको मात्रै किन चर्चा हुन्छ ? नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेकपा एमाले एउटा धु्रवतारा जस्तै छर्लङ्ग छ । त्यसैले हामीले अख्तियारी गरेको गन्तव्य कुनै राजनीतिक दल बनाउन होइन । हामीले आम नेपालीको समृद्धिका कुरा गरेका छौं । नेपालको समग्र विकासको कुरा गरेका छौं । त्यसकारण यो सम्भव पनि छ । अबका दिनमा नेपाली जनताको रोजाई नेकपा एमाले हुनेछ । अबको सबै प्रकारको निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई भोट दिन्छन् भन्ने विश्वास छ ।
जिल्ला अधिवेशनको सन्दर्भमा तपाईको भूमिका के हो ?
अबको जिल्ला अधिवेशनमा पार्टीका सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नै ७७ वटै जिल्लालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरेका छौं । काभ्रेली जनताले काभ्रेमा पनि आजसम्म कुनैपनि राजनीतिक दलले नगरेको जनसागर उर्लाएर काभ्रेबाट यो सन्देश दिँदैछौं । काभ्रेका ६ वटै क्षेत्रमा नेकपा एमालेको विजय सुनिश्चित छ भन्ने सन्देश पनि हामी दिन चाहन्छौं । हामी जसरी हिजो मुलुक भरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देश एमालेमय छ भन्ने सन्देश दियौं त्यो सन्देश काभ्रेबाट फेरी दिँदैछौं । यसको लागि हाम्रा हरेक जनसंगठनहरु परिचालित छन् । १३ वटै पालिकाका नेता कार्यकर्ता अहोरात्र लागिपरेका छन् । हरेक ठाउँबाट काभ्रेली जनताहरुबाट अधिवेशन सफल पार्नुपर्छ भन्ने सन्देश पाएका छौं । सम्भवतः यो अधिवेशन ऐतिहासिक हुनेछ ।
अधिवेशनको सन्दर्भमा काभ्रेको विकासको एजेण्डा के हुनेछ ?
हामी लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई अँगाल्ने, प्रजातन्त्रलाई विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले हामीलाई नेतृत्वको विषयमा त्यति ठूलो समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन । विकासको कुरा गर्ने हो भने विकासको संवाहक नै नेकपा एमाले हो । आजभन्दा १० वर्ष अगाडिको काभ्रे जिल्ला र अहिलेको काभ्रे जिल्ला नियाल्ने हो भने धेरै विकासका कामहरु भएका छन् । सडक सञ्जालहरु प्रशस्तै छन् । यो सबै गर्ने नेकपा एमाले हो । व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने असल पुस्ता निर्माणको संवाहकको रुपमा प्रस्तुत हुन चाहन्छ एमाले । मेरो नारा नै छ– असल पुस्ताको निर्माण रेशम लामाको अभियान । स्वच्छ छवि भएका निष्कलंकित व्यक्तिले मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र छान्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिनलाई म हरेक घरमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको छु ।